Jendai Frazer oo ay fikradaheeda ku aaddan Soomaaliya wax iska bedeleen kadib markii ay la kulan tahay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Cali Cabdalla Saalax, Taageeerayaasha Xaaji Abukar Caddaani iyo kuwa Prof. Cali Geeddi oo uu dagaal ay dad ku dhenteen ku dhex maray agagaarka Raaga Ceel iyo Weerararadii lagu hayay ciidamda Itoobiya oo ka billowday Muqdisho. Ruunkinet 08/01/07 (Click)
Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Jendai Frazer ayaa la sheegay in ay fikradihii hore ee ku aadana Soomaaliya wax iska bedeleen.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii ay la kulantay madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Yeman mudane Cismaaciil Cumar Geelle iyo Cali Cabdalla Saalax.
Jandai oo Nayroobi kula kulantay sida la sheegay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa u sheegtay in ay haatan waxbadan ka ogaatay arrimaha Soomaaliya ayna dooneyn in ay la safato hal dhinca oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale joojisay amarkii ay ku siisay in ay dalkeeda ka baxaan mudanayaasha taageersan guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan.
Dhinaca kale, wararka ka immaanaya degaanka Raage Ceel ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in dagaal uu ku dhex maray maleeshiyaad kala taageersan Xaaji Abuukar Caddaani iyo Prof. Cali Maxamed Geeddi oo ah ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dagaalkan oo sida la sheegay ka dhacay tuulo lagu magacaabo Ceelka Cali Guduud oo u dhow Raage Ceel ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 5 ruux qaar kalna ay ku dhaawacmeen.
Dhanka kale, waxaa magaalada Muqdisho laga hordhiyay dagaalkii gaadmada ahaa ee lagu hayay ciidamada Itoobiya ee qabsaday inta badan Koofunta Soomaaliya.
Wararka ka immaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka soo horjeeda jookitaanka Ciidamada Itoobiya ay gubeen laba gaari oo ay saarnaayeen ciidamada Itoobiyaan ah.
Falkan ayaa la sheegay in uu shalay ka dhacay meel aan ka fogeyn K4 oo ka tirsan koofunta magaalada Muqdisho.
Dad aan ka fogeyn halka uu falkaasi ka dhacay ayaa Ruunkinet u sheegay in ay ku dhinteen qaar ka tirsan ciidamadii saarnaa labada gaari iyo hal ruux oo haweyn ah oo ay ciidamda Itoobiya rasaas ku fureen.